Qofkii ugu Horeeyay ee Laga talaallo Cudurka ‘Korona Fayruska’ Laakiin Goormaa La Heli Karaa Tallaalka Saxda? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Xidigtii Instagram oo uu Xabsi Korona Ku Dhex-haleelay
BBC Somali, April 19, 2020
Qofka ugu horreeya ee la tallaalaa waa 43-jir Jennifer Haller.
Waxaa bilaabmay weji cusub oo tijaabo caafimaad oo ah tallaalka suurtagalka ah ee korona fayruska (SARS-CoV2) ayaa bilaabatay Isniintii, wuxuuna ka bilaabmay magaalada Seattle ee dalka Mareykanka, waxaana la helay qofkii ugu horeeya ee iska diiwaangelinaya tijaabada qaadashada tallaalka.
Tallaalka, mRNA-1273, waxaa soo saaray shirkadda cilmiga bayoolajiga ee Moderna oo ay weheliso baarayaal ka socda Machadka Qaranka ee Caafimaadka (NIH). Tijaabada waxaa lagu qaadayaa Machadka Cilmi baarista Caafimaadka ee Washington Permanente ee Seattle.
Daraasada wejiga 1aad ayaa ujeedadeedu tahay in lagu tijaabiyo seddex qiyaasood oo kala duwan oo ah tallaalka mRNA-1273 ad ayaa rajeyneysa in ay shaqaaleysiiso 45 qof qaangaar oo caafimaad qaba. Tijaabada koowaad, ka qeybgaleyaasha ayaa heli doona labo talaal, 28 maalmood oo kala fog waxaana lala socon doonaa si loo qiimeeyo amaanka iyo talaalka labadaba. Tan dambe waxay ku lug leedahay aragtida sida wanaagsan ee tallaalku u kicinayo jawaab celinta difaaca ee borotiinka dusha ee Korona fayrus SARS-CoV2.
Qofka ugu horreeya ee la tallaalaa waa 43-jir Jennifer Haller oo reer Seattle ah oo tirri; Waxaan rajeynayaa inaan si dhakhso ah u helno tallaal shaqeynaya oo aan badbaadin karno nolosha dadkuna ay nolosha ku laaban karaan sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagalka ah, ”wareysi lala yeeshay TIME.
“Daraasadani waa talaabada ugu horeysa ee horumarinta kiliinikada ee tallaalka mRNA ee ka hortagga SARS-CoV-2, waxaana rajeyneynaa inay bixin doonto macluumaad muhiim ah oo ku saabsan amniga iyo is-tallaalida,” ayuu yiri Tal Zaks, MD, Ph.D., Madaxa Caafimaadka Moderna. Wuxuu intaas ku daray in Moderna ay mar hore la shaqeyneyso FDA iyo ururro kale si ay ugu diyaar garoobaan wejiga 2-da tijaabada, taas oo ay ku lug yeelan doonaan tiro badan oo bukaanno ah.
Khubarada caafimaadka ayaa xoogga saaraya sidii tallaal loogu heli lahaa cudurkan kumannaanka qof ku laayay daafaha adduunka. Tallaalada caadiga ah ee fayraska cudurrada keena sidan kan jadeecada ayaa laga sameeyaa fayraskaasi oo la wiiqay ama la dilay.
Hase yeeshee tallaalkan tijaabada ah oo lagu magacaabo mRNA-1273 ayaan laga samayn fayraska sababa xanuunka Covid-19. Taa badelkeeda waxaa ku jira qeyb kamid ah astaanta hide-side laga soo minguuriyay fayraska isla markaana lagu diyaariyay xarun shaybaar.
Waxaa la rajeynayaa in tallaalkan tijaabada ah uu xoojiyo difaaca jirka bani’aadanka si uu ula dagaallamo fayraska keena xanuunka. Dadka matudawiciinta ah ayaa la siiyay qiyaas kala duwan oo tallaalka tijaabada ah. Qeybta sare ee muruqa garabka ayaa laga durayaa laba jeer oo 28 cisho ay u dhexeyso.
Hase yeeshee, xittaa haddii tijaabadan bilowga ah lagu guulaysto, waxa ay qaadan kartaa ilaa sanad iyo bar in si buuxda ay dadweynaha u helaan tallaalka fayraska Corona.
Tallaalku ma sababi karo COVID-19 mana laha fayriska sida ay la mid tahay tallaalada kale qaarkood. Taabadalkeed waxa ku jira gabal yar oo lambar hidde ah oo loo yaqaan mRNA kaas oo saynisyahannadu ka soo saareen fayraska ka dibna lagu balaariyey shaybaarka. Xaaladdan oo kale, mRNA-da waxay ku dhejisaa borotiinka ”spike” fayruus oo muhiim u ah coronavirus-ka si ay u helaan unugyada aadanaha. Baarayaasha waxay rajaynayaan in tallaalku kicin doono nidaamka difaaca jirka si uu u weeraro fayraska, ka hortago horumarka COVID-19.
Kizzmekia Corbett, Ph.D., oo ka tirsan Xarunta Cilmi baarista Tallaalka ee NIAID waxay ka hadashaa dadaallada lagu horumarinayo tallaalka ka dhanka ah SARS-CoV-2, ee sababa COVID-19. Wuxuu ahaa wareysi lala yeeshay Jan. 28, 2020.
Tallaalka mRNA-1723 laguma tijaabin jiirarka kahor bilowga tijaabooyinka caafimaad ee bini-aadamka, waa dhacdo naadir ah oo aad u naadir ah oo cadaynaysa inay tahay mid la isku khilaafsan yahay. Khubarada qaar ayaa ku adkaysanaya in baahida degdegga ah ee xaaladda jirta ay ka dhigan tahay tan inay tahay mid xaq ah, halka kuwo kale ay ka walaacsan yihiin inay tani jebin karto heerar kala duwan oo anshaxeed iyo badbaado ah isla markaana ka dhigaya ka-qaybgalayaasha tijaabada inay galaan halis ka weyn tan caadiga ah.
In kasta oo nashqadeynta iyo soosaarka tallaalka mustaqbalka uu ahaa mid aad u dhakhso badan, qiimeyntu waxay qaadan doontaa waqti badan. Dhammaan ka qeybgalayaasha waxaa la raaci doonaa 12 bilood kadib tallaalka labaad si ay u soo aruuriyaan xog aruurinta baarayaashu markii hore u baahdeen in ay ogaadaan bal in ay fiican tahay oo ay waxtar leedahay. Daraasadda ayaa wali diiwaangelineysa dadka caafimaad qaba ee jira 18-55 ee Seattle si ay uga caawiyaan tijaabada tallaalka cusub.
Tags: Qofkii ugu Horeeyay ee Laga talaallo Cudurka 'Korona Fayruska' Laakiin Goormaa La Heli Karaa Tallaalka Saxda?
Next post Falanqeynta Buugga Nasiibka Nolosha 1975-1978
Previous post Talo Muhiim ah oo ku Saabsan Caabuqa Korona Fayrus